Qaadashada aqalka dhirta lagu koriyo leh gacmahaaga: sawir ka mid ah sida loo abaabulo booska, ka dhigo rets iyo paths
Daroogada Veterinary "Vetom 1.1": tilmaamaha isticmaalka
Waxyaalaha kala duwan ee loo yaqaan "Victoria"
Articles Interesting - January 26,2020
"Grow big, not small", kiciyaasha kobaca ee geedo kudhan
Lo'da cabitaan biyo: intee in le'eg ayaad bixinaysaa, sababta aanad u cabin ama cabin wax yar
Ubaxa quruxda leh ur aan fiicnayn - Amorphophallus Cognac
Amorphophallus waa warshad aad u qurux badan oo aan u baahnayn shuruudo gaar ah oo loogu talagalay beerashada. Its highlightfold waa ubax weyn burgundy ah oo u muuqda guga xitaa ka hor caleen. Si kastaba ha noqotee, quruxda noocaas ahi waxay leedahay ur adag oo aad u xun, sida hilibka khaldan - sababtoo ah, mararka qaarkood waxaad xitaa inaad xargaha ka saartaa qolka balbaliga.
Xeerarka diyaarinta iyo isticmaalka violets violetolor
Sprouts sprouts: sida loo kaydiyo cirridka jiilaalka ee guriga dhexdiisa ama dhulka hoostiisa?
Hippeastrum qurxinta: koraya iyo dhalmo ka soo abuurka at home
Nidaamka tallaalka ee lo'da
Ma suurtogal tahay in la siiyo luuliyo bakaylaha
Orchard: Xeerarka qorshaynta beerta iyo doorashada xulashada
Inay dhisaan ilo ku yaal dalka oo gacmahooda leh
Bacriminta cas ee casaanka ah: sida loo ilaaliyo basbaaska kuleylka qaboobaha qaboojiyaha iyo tuubooyinka?
Pawpaw: sida loo koro geed banaan oo ku yaal hareeraha dhexe
Waa maxay faraqa u dhexeeya germanyum iyo pelargonium?
Cudurada ugu waaweyn iyo cayayaanka ee jeeriga iyo hababka looga hortago
TOP-7 oo ah cayayaanka lo'da
Mushrooms ee xaafadaha - kuwaas oo la cuno
Horumarinta dhakhso u koraya oo leh tiro muruq oo wanaagsan - Digaagga Magyar
Noocyada digaagga ee loo yaqaan 'Hungarian' ayaa lagu tiriyaa kuwa ugu fiican. Kuwaas waxaa ka mid ah Madyarov - digaagga wax soo saarka hilibka. Shimbirahaasi waxay si dhakhso ah u gaari karaan qaangooyooyinka waxayna dhisaan muruq wanaagsan. Si kastaba ha noqotee, digaaggan, Madyaradu waxay u baahan yihiin in si habboon loo quudiyo, haddii kale kobcintoodu aad ayay u sii yaraanaysaa. Chicken Magyar waxaa laga helay hareeraha digaagga, laga soo bilaabo wakhtigii lagu noolaa ee ku yaalla dalka Hungary, oo leh Orpington.
Noocyada daryeelka ee boogaha gudaha
Goobta gudaha ku jirta waa mid ka mid ah dhirta ugu caansan ee bannaanka. Dhulka dhul-beereedka caadiga ah (Hedera helix - cidhiidhi ah) waa Mediterranean. Maanta, waxaan uga mahadcelineynaa shaqada beeraha, waxaa jira in ka badan boqol nooc oo ivy gudaha (Holibra, Xaawa, Mona Lisa, Harald, Jubilee, iwm). Ma taqaanaa?
Doomaha fardaha: xulashada xayawaanka, hababka taranka, siyaabaha loo maareyn lahaa
Marka fardo fuusho, qodobka muhiimka ah waa xulashada saxda ah ee shakhsiyaadka awooda inay soo saaraan farcanka iyada oo si habboon loogu talagalay sifooyinka wanaagsan: laga bilaabo muuqaalka illaa kartida shaqada. Ujeedadaas awgeed, habab kala duwan oo loo isticmaalo xayawaanka xoolaha ayaa loo isticmaalaa, iyo fardaha naftooda waa in loo diyaariyaa habkan.
Cuntooyinka kaabajka ah ee kaabajka ah iyo midab leh ka soo kaabajka Peking. Sawirka suxulka iyo diyaarinta roodhiga talaabo talaabo
Kaabashka cuncunku waa mid si fiican loo yaqaan oo aad loo jecel yahay. Badanaa, hoogaamiyeyaasha ayaa leh mawduuc dhaqameed oo keliya ee raaxeysigan, taas oo ah nasiib daro nasiib darro ah. Miyuu suurtagal yahay in lagu karsado iyada oo lagu daro boqoshaada cad ama jiiska tofu? In this article waxaan ku sharxi doonaa sida loo kariyo lakabyo leh iyo kaabajyo kaabash kala duwan ka soo kaabajka Peking caafimaad leh.
Waa maxay wanaagsan yahay kala duwan ee dabocase, sida loo koro oo loo isticmaalo?
Ka hor inta aan la beeri dhirta hore ee beerta, su'aasha mar walba waxay soo baxdaa sida noocyada kala duwan ee lagu doorto iyo waxa ay yihiin faa iido iyo xayawaanka. Dad badan ayaa raba in ay ku beeri radishes beerta, laakiin waxaa lumay in badan oo kala duwan. Sidaa darteed, maqaalkani wuxuu sharxayaa sifooyinka dabocase kala duwan "Heat", si ay bannaanka u sii baro badan oo ku saabsan. Kala duwan oo aan la qabin, waxay u dhaqso badan si dhakhso ah, caleemaha u muuqda dhowr maalmood, iyo dhadhanka cajiibka ah waa adag tahay in la isku qaldo noocyo kale oo khudradan.
Gloxinia quruxsan ayaa hoos u dhacday - Maxaa la samaynayaa xiga?
Roobin currants cas. Red Currant Noocyo
Currant Red ama Currant caadiga ah, ama beerta Currant - dhaqanka berry ku baahsan dunida, kuwaas oo ay duurka ku kulmaan ficil kasta dacha xilliga oo dhan iyo ma aha oo kaliya. Waa fududahay in lagu daryeelo currants cas, duurka u siin goosashada hodan ah. Waxaad sameyn kartaa macmacaan kala duwan, wax lagu kariyo, saxarado, iwm.
Noocyada isticmaalka saliida madow ee madow ee ku oncology
Seeds madoow madow ah qarniyo badan ayaa loo isticmaalaa sida tartiib tartiib ah. Laakiin, intaa waxaa dheer, saliidda laga sameeyay iyaga ayaa leh bogsiin khaas ah oo loo isticmaalo daaweynta, oo ay ku jirto daaweynta kansarka. Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan tan - maaddadeena. Waxyaabaha ku jira kiimikada Waxyaabaha hoos loo eegay waxaa ka mid ah isku-dar ah asiidh dufan leh oo fuuqbaxay, fosfolipids, 15 amino acids (8 ka mid ah waa muhiim), carotenoids, fitamiino E, D, C, koox B, macdan (potassium, sodium, fosfooraska, calcium, manganese, birta, zinc, copper, selenium, nickel, iwm.
Apple "Ola": dabeecadaha iyo codsiga, qarsoonaanta beerashada guuleysata
Caadi ahaan, noocyo kala duwan oo dhirta qalaad ayaa loo isticmaalaa naqshada muuqaalka. Si kastaba ha ahaatee, iyada oo aan la raali ka ahayn, masters-ka naqshadeeynta goobta waxay isticmaalaan dhaqankooda aqoonta u leh cirqiga, marka laga reebo laga yaabo in waxoogaa wax laga beddelo. Goob gaar ah oo iyaga ka mid ah waxaa degsan geedo tufaax ah oo qurxoon.
Tiknoolajiyada iyo hababka wax lagu beerto
У фермеров, как и у владельцев крупных участков, немало забот. Marka laga soo tago daryeelka beeraha iyo goosashada, waxay sidoo kale isku dayaan in ay carrada ku hayaan xaalad "hufan". Si taas loo gaaro, waxaad u baahan tahay inaad ogaato dhammaan faahfaahinta hawlgalka. Tixgeli hababka loo adeegsado goobaha, iyo sida ay u kala duwan yihiin midba midka kale.
Sidee loo dhalaaliyaa malab?
Haddii aad ka heshid shelf waa weel cad oo ah malab digaag ah, waa inaad ogaataa in si buuxda loo cuni karo. Kaliya waa in si fiican loo dhalaalaa. Iyo sida loo sameeyo, hadda waxaan helnaa. Noocyada Dhuxusha Inta badan bangiyada waxaa jira qadar go'an oo badeeco ah, kaas oo ah candhuuf iyo jajab. Dadku waxay yiraahdaan: "Malabkani ma aha mid xun, taas oo aan sonkor lahayn."
Xayawaanka la gooyey: sifooyinka dhulka iyo ka tagista
Kuwani waxay ubaxyo qurux aan qabyo ahayn - mid ka mid ah geedaha ugu horeeya ee guga. Magaca Laatiinka ah ee dhirta ayaa ka timid erayga Giriigga ah ee "qasaarada" - koofiyada, iyo waxa uu la xidhiidhaa muuqaalka ubaxa. Xayawaanka la qalajiyey waa warshad ka tirsan cayayaanka oo tiradoodu ka badan tahay 300 noocyo kala duwan, sida ku xusan sharaxaadeeda, halkan waxaa lagama maarmaan ah in la taxo faa'iidooyinka badan ee: waa baraf u adkaysta, difaaca cudurada iyo cayayaanka, uma baahna daryeel gaar ah, waa geedka malab weyn, sidoo kale aad u fudud badinta.
Apricot "Prince Black": beerashada iyo daryeelka beerta
Apricot "Black Prince" ma yaqaanaan dhammaan beerta, laakiin si dhakhso ah ayaa loo helaa caan. Kala duwanaansho - isku dhafka ah ee khudaarta, tubta cherry iyo tubta, sida ku xusan caleemaha, waxay u muuqatay natiijo ka mid ah pollination rabitaanka khudradda cherry khudradda. Kadibna, waxoogaa ayaa la hagaajiyay iyada oo lagu darey sifooyinka muuqaalka ee tubta.
Sida loo koro geed geedka geedo
In dabiiciga ah, waxaa jira geedo loo beeray beergooyska, waxaana jira kuwa loo isticmaalo qurxinta qurxinta. Ugu dambeyntii waxaa ka mid ah geedo diyaaradeed, oo ku yaal Bariga waxaa lagu magacaabaa Chinara. Noocyada Platanus Maanta, 10 noocyada dhirta diyaaradaha ayaa la og yahay in ay korayaan adduunka oo dhan. Kuwa ugu caansan waa kuwan soo socda: Common.
GPZKU waxay dhistaa iskaashiga Turkiga
Dhowaan, wafdi ka socda Hay'adda Cuntada iyo Macdanta ee Ukraine, oo uu hoggaaminayo Gudoomiye Ku Xigeenka Guddiga "GPZKU" Alexander Senem, ayaa booqasho ku yimid Ankara (Turkiya). Ujeedada ugu weyn ee booqashada, kaas oo lagu qabtay martiqaadkii guud ee Golaha Guud ee Turkiga (TMA), wuxuu ahaa inuu abuuro xiriir laba dhinac ah oo uu la yeesho wada xaajoodka u dhexeeya Geedi Rada iyo Guddiga Warshadaha Cuntada ee Gobolka.
Lemon tree at home: sida loo abuuro liin ka dhagax iyo sida loo xidho gooynta?
Joy iyo farxad waxay keeni doonaan geed liin ah oo ka soo baxa gooyn ama dhagax fudud. Midabkiisu waxay noqon doontaa mid aad u macaan badan oo udgoon badan marka loo eego kuwa iibiya. Abuuritaanka abuur abuurka ka hor Ka hor beerashada liin, waxaa lagama maarmaan ah in la doorto miraha si fiican u bislaaday. Waxaa ka fiican in la siiyo doorasho si ay u weynaadaan, undemonated iyo liin macaan.
Cinjir Champagne Pinot Noir iyo noocyo kala duwan
Xitaa midka aan waligiis lakulmaynin khamriga Faransiisku wuxuu maqlay maqaalkii ugu da'da ahaa ee Faransiiska kala duwan iyo noocyada kala duwan. Caankii iyo mudnaanta muddada fog ee noocyada kala duwan ee noocaan ah waxay kasbadeen cinwaanka noocyada kala duwan ee sabiib ee koray si loo soo saaro khamriga miiska. Waxaa jira in ka badan boqol nooc, taas oo ku kala duwan ee muuqaalka of berry, shuruudaha bislaadaan iyo dhadhan.
Copyright © 2020 Cilmi-baarista Wise
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © 2020